wararka maanta-arlaadii.net » Dagaalo Xalay ka dhacay Afgooye iyo Shabab Oo qabsadeen qaybo ka mid ah Afgooye
Dagaalo aad u qareera ayaa xakay Ka dhacay degmada Afgooye ee Gobolka shabeelada Hoose .
Dagaalkani oo bilawday abaari Maqribadii ayaa Waxaa soo qaaday Ciidamada Alshabaab kuwaaso Kaga soo qaaday dhanka Koonfur Ee degmada Afgooye .
Lama ogo qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay Dagaalkani balse wararka qaar ayaa sheegayo in Dagaalkani ay ku dhinteen 2 qof Halka 3 kalane ay ku dhaawac meen kuwaaso ku dhaqnaa Gudaha Degmada Afgooye qaarkoodna ay ciidamada labada dhinac
Warbaahinta alshabaab ayaa sheegtay in Dagaalkaas Ay ku dileen Ciidamo tira badan oo Dawlada ka tirsan kuwaaso Gaaraayay ilaa 13 qof .iyagoo intaasi kudaray in Ay qabsadeen inta badan Degmada Afgooye.
Majirto Cid ka tirsan Maamulka Degmada Afgooye oo Ka hadlay Dagaalkani Hase yeeshee Warbaahinta Arlaadii ayaa xaqiijisay in Ciidamada Alshabaab ay qabsadeen qayba ka mid Ah Degmada Afgooye iyagoo Kaga yimid dhanka Buula fooliya Halkaaso ay werar kusoo qaadeen Fariisin Ay ciidanada dawlada ku lahaayeen Iyadoo weerar uu ahaa Mid aad u culus.
Sikastaba ahaate Degamada afgooye oo ay Gacanta ku haayan Maamulka koonfur Galbeed aya Waxaa ka dhaca weeraro iyo dilal ay fulinayaan Alshabaab Iyagoo inta badan jooga Tuulooyinka Afggoye hoos yimaada.
Madaxweyne Farmaajo Oo xalay Ku Hooyday Cadaado isago Maantana Ku wajahan Dhuusamareeb